Indawo eyothusayo yokubalekela emanzini, ilala 14!
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguBreathe
Eli khaya lihle eLac Beauclair yabantu abali-14, elikwimizuzu engama-20 kuphela ukusuka eWakefield kunye nemizuzu engama-45 ukusuka edolophini eOttawa, yiyo yonke into onokuyiphupha! Ukuzola, ukuphumla, kunye nangasese ejikelezwe lihlathi. Yiya ezantsi kwidokhi yokuqubha, indawo yokuphumla, i-BBQ kwaye utye kwindawo enkulu yedesika ejonge emanzini, okanye wonwabele umlilo oqaqambileyo ngembonakalo entle yechibi. Ukuzola emsebenzini okanye kuxinzelelo lwemihla ngemihla kubomi bemihla ngemihla ngokuzola kwendalo. Isandi somoya emithini kunye nokuhla okumangalisayo kunye nokuhamba kwechibi kuya kwenza imimangaliso.
Mininzi imisebenzi emikhulu yangaphandle ekufutshane enje ngokutyibiliza ehlathini (Lac des loups 7min away), iimayile zeendlela ezinqumla ilizwe lokutyibiliza kunye neenduli ze-ski ngaphakathi kweyure enye njenge: Vorlage, Edelweiess & Camp Fortune, Mont Cascades. Le ndawo ikwaqhayisa ngeendledlana zokuhamba, amatyotyombe imaple kwaye unokude ukhwele ikhephu okanye utyibilike kanye ngomnyango uye echibini xa linomkhenkce! Buyela ekhaya kwaye uphumle kwindawo yomlilo yombane. Ngeentsuku ezibandayo zasebusika, cela umngeni kusapho lwakho kumdlalo weping pong, okanye uphumle ngeNetflix okanye iDVD kumabonwakude omkhulu.
I-Wakefield ineendawo zokutyela ezimangalisayo zasekhaya, iibhaka, iivenkile zeboutique kunye nokunye kwaye yindlela entle yokuchitha usuku (okanye ezininzi) uhamba ujikeleza kwaye uhlola!
I-Ottawa ikwimizuzu engama-45 kuphela ukusuka apho unokuthatha ithuba lezakhiwo zembali edolophini, tyibilika kwiRideau Canal eyaziwayo kwaye uhambe ujikeleze imarike yaseByward ezantsi kwedolophu ehlala inokonwabisa ezitalatweni, iindawo zokutyela ezinkulu kwaye uqiniseke ukuba ubambe ipastry yeBeavertail!
Iintsapho ezongeziweyo ziya kuyithanda i-bunkie, eyikhaya elizimeleyo elixhotyiswe ngokupheleleyo elilala ezi-4 (ezi-2 kwibhedi yokumkanikazi kunye nezi-2 kwibhanti). Igumbi lokuhlambela eligcweleyo kunye nekhitshi liqinisekisa ukuba unokuba nexesha elizimeleyo xa lifuneka kwaye lisasazwe kodwa uqokelele kwindlu enkulu njengoko ufuna.
Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo lenzelwe ukusingatha isidlo esigqibeleleyo sosapho!
Iindwendwe ezili-10 zinokulala kamnandi kwikhaya lethu eliphambili. Uyilo ngolu hlobo lulandelayo:
- Igumbi lokulala eliphambili (iindawo zokulala 2): Ibhedi ye-Queen
- Igumbi lokulala eliphezulu (ilala 2): Ibhedi ye-Queen
- Igumbi lokulala eliphezulu (ilala 3): Ibhedi yebhanti. Amawele phezu kwebhedi ephindwe kabini
- Igumbi lokulala elingaphantsi (indawo yokulala 3): Ibhedi yebhanti. Amawele phezu kwebhedi ephindwe kabini
Ikhaya linamagumbi okuhlambela amabini agcweleyo (enye ineshawari yokumisa kwaye eyesibini ineshawari phezu kwebhafu yokuhlambela).
- Nceda uze neebhatyi zakho zobomi njengoko singaboneleli naziphi na ukusetyenziswa kweendwendwe.
- Izikhephe ezinemoto azivumelekanga echibini nangona kunjalo sinawo amaphenyane, iikayak kunye neebhodi ze-SUP ezikhoyo ukuba zisetyenziswe.
- Kukho ukungena ngokuthe ngcembe kwamanzi kunye nechibi elihle elinesanti esezantsi.
- Kukho ikhamera yokhuseleko ebeka iliso emnyango kwaye amaqela akavumelekanga. Nceda ucele iindwendwe ezongezelelweyo kwangaphambili.
- Akukho detector ye-co2 edwelisiweyo njengoko kungekho gesi endlwini.
Nceda uqaphele iindonga ezikumgangatho ophezulu aziyi ngasekunene kwisilingi ngoko kukho indawo evulekileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Breathe
Izimvo eziyi-3 782